Calaamadaha Crypto Bilaashka ah ee ugu Fiican May 2022 & Wararka Crypto | cryptosignals.org
Aaladaha Ganacsiga Crypto ee ugu Fiican
Waa maxay Suuqa Crypto iyo sababta ay tahay inaad uga ganacsato? Hagaha bilowga ah
Calaamadaha ugu Wanaagsan ee Crypto Groups Telegram - Tilmaam Buuxa
Goobaha ugu fiican ee loo yaqaan 'Crypto Staking'
Dullaaliinta ugu Fiican Bitcoin
Dillaaliyeyaasha ugu fiican Ethereum
Sida loo iibsado Token Aasaasiga ah
Sida loo iibsado Solana
Sida loo Aqriyo Lamaanaha
Sida loo dhigo Ganacsi
Baro Sida Loo Maalgeliyo Ganacsiga Crypto
Baro sida loo ganacsado Crypto Trade
Waa maxay Pips Crypto
Ku iibso Crypto Kaarka Amaahda
Ku iibso Crypto Kaarka Debit
Ku Soo Biir Kooxdayada Telegram-ka ee VIP
Ku shub eToro si aad u hesho Bilaashka VIP-dayada Bilaash!
Ganacsiga HadaKu dheji 250$ eToro si aad u hesho Ishaarooyinkayaga VIP-da Bilaash! Ganacsi kumanaan CFD ah
Calaamadaha Crypto ee ugu Fiican 2022
CryptoSignals.org waa koox ganacsato aad u tababaran oo ka ganacsanayay suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency' tan iyo 2014
Waxaan go'aansanay inaan beel dhisanno telegraam si dadka kale ay wax uga bartaan calaamadeena saxda ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency'.
Kusoo Biir Telegramkeena Bilaashka ah
Furo Calaamadaha Maalinlaha ee Cryptocurrency
Ku soo biir Kooxda VIP adoo dooranaya xirmo ka hooseysa adiga kugu habboon, waxaan bixinnaa dammaanad-celin 30-maalmood oo lacag-celin ah sidaa darteed ma jiraan wax lumaya adigoo isku dayaya calaamadeena tayo-sarreysa ee tayo sare leh.
Biilasha Bishiiba £ 42
2-3 Calaamadaha Maalin kasta
82% Heerka Guusha
Gelitaan, Qaado Faa'iido & Jooji Khasaare
Qaddarka Halista Hal Ganacsi
Saamiga Abaalmarinta Khatarta
Most Popular Biilasha Quarterly £ 78
Biilasha BI-SANADKA £ 114
Biilasha Sanad £ 210
KHARASHO Dullaaliinta ugu fiican DALKAAGA
Noqo Ganacsade Xirfad Leh!
Xisaab la fur mid ka mid ah dallaalkeenna. Oo hel helitaankeena intaad nooshahay VIP Calaamadaha Crypto BILAASH AH! Diiwaangeli oo ku dhig ugu yaraan 250$ dilaaliinta Crypto ee hoos ku qoran ee la nidaamiyay.
eToro waa madal hanti badan leh oo bixiya labadaba maalgashiga Forex, Kaydka, iyo Cryptocurrencies, iyo sidoo kale ka ganacsiga hantida CFD. CFD -yada waa qalab adag waxayna la yimaadaan halis sare oo ah in lacag si dhaqso ah loo lumiyo sababtuna tahay awood qaadasho.
CFDyadu waa aalado isku dhafan oo waxay la yimaadaan khatar sare oo ah inay dhaqso u lumiyaan lacag ka faa iideysiga awgeed. 71.2% xisaabaadka maal gashiga tafaariiqda ayaa lumiya lacag markay CFD-yada la ganacsanayaan adeeg bixiyahan.
Ilaa 500: 1 leverage, ka ganacsado kumanaan CFDs iyo tas-hiilaadka Leverage ee diyaar ah. Indices, FX, Crypto iyo in ka badan oo hal meel ah. Waxaan ku soconaa mayl dheeri ah annagoo siinaya is-dhexgal isticmaale-saaxiibtinimo iyo astaamo cusub.
Ku soo biirkeena Kooxda Telegram Bilaash ah
Waxaan u dirnaa 3 calaamadaha VIP usbuucii annaga bilaash Telegram group, Calaamad waliba waxay la imaaneysaa falanqeyn farsamo oo dhameystiran oo ku saabsan sababta aan ganacsiga u qaadaneyno iyo sida loo dhex dhigo dillaalkaaga.
Hesho dhadhaminta waxa ay tahay kooxda VIP adoo hadda ku biiraya BILAASH!
Kusoo Biir Telegramkeena Bilaashka ahBaro calaamadahayaga
Guriga Calaamadaha Crypto-Sare ee Sare
Lagu Toosiyay Adiga App -ka Telegram -ka waqtiga dhabta ah!
Kooxdayada ganacsatada ah ee ku jira guriga 'CryptoSignals.org' waxay baarayaan suuqyada loo yaqaan 'crypto' suuqyada saacad kasta si aadan u baahnayn. Iyadoo loo marayo isku dhafka falanqaynta qotada dheer ee farsamada, algorithms-yada AI, iyo cilmi baarista aasaasiga ah - CryptoSignals.org waxay si joogto ah u raadineysaa fursado ganacsi xubnaheenna.
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad nagu soo booqato, noo ogolow inaan sharaxno waxa aan halkan ku samayno CryptoSignals.org
AKHRISO WARARKII UGU DANBEEYAY EE WARARKAAGA FARSAMADA IYO AASAASIGA AH
Sawir lama heli karo!
Saadaasha Qiimaha DeFi Coin: DEFC/USD waxay ku ganacsanaysaa u dhaw $0.30 iska caabin ah
Saadaasha Qiimaha Lucky Block: LBLOCK/USD Waxay u socotaa korka sare
Wax-soo-saarka Bitcoin ee wax-is-beddelka ayaa hoos ugu dhacay 18-bilood ee Maajo iyadoo cabsida suuqa ay kor u kacday
Bitcoin (BTC/USD) gorgortanka ganacsiga ee $30,000
Cardano Waxay Isku Duubaysaa in ka badan $0.50 Taageerada Soo Celinta Qiimaha Macquul ah
Waxaa laga yaabaa 21, 2022
TerraUST (USTUSD) Waxqabadka Suuqa Waxa uu ku Bilaabaa Qaanso Dhan
Saadaasha Qiimaha DeFi Coin: DEFC/USD waxay u kala duwan tahay sida qiimaha ku socda Waqooyiga
Saadaasha Qiimaha Lucky Block: LBLOCK/USD kor u kaca $0.0025
Eedaymaha Qorshaha Ponzi ee ka dhanka ah LUNA ayaa soo laba kacleeyay ka dib hadallo aan wanaagsanayn oo ka soo yeedhay maamulaha shirkadda Terra
Bitcoin Cash (BCH/USD) Ganacsiga Suuqyada hoos yimaada Niyad-jabka
Ethereum waxa ay isku koobaysaa in ka badan $1,763 marka ay isku diyaarinayso in ay soo ceshato $2,200
Terra (LUNAUSD) Deal Bears Deal markii ugu horeysay ee suuqa
Waxa Aad Gasho
Ku guuleysiga Cryptocurrency
Signal VIP Kooxda
Haddii aad ku cusub tahay suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency' oo aad jeclaan lahayd inaad barato sida loo ganacsado, u maaree khatarta si sax ah oo u hel xisaabtaada ganacsiga faa'iido ka dib eeg wax badan oo ku saabsan waxa aan ku bixinno hoosta.
Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano 1500 pips bishii bil kasta ka ganacsiga Bitcoin kaligeed!
Ganacsi kasta wuxuu la yimaadaa falanqeyn farsamo oo dhameystiran, oo sharxaya sababta aan u qaadaneyno ganacsiga, waxaan tan u sameynaa si aad wax ugu baratid sida aad wax u ganacsaneyso.
HALISTA AQOONSIGA HALIS
Waxaan si cad u sheegaynaa RRR (saamiga halista-abaalmarinta) ganacsi kasta oo aan ka shaqeyno saamiga 1: 2 & 1: 3 si aanad waligaa khatar badan ugu gelin ganacsi oo aad u hesho fursad sare oo aad ku kasbato.
Calaamadeena waxaa kaliya lagu diraa Telegram, habkaas sida ugu dhakhsaha badan marka ay calaamaddu soo marto, isla markiiba wey kuu soo maraysaa.
Markaad ku soo biirto kooxdeena VIP waxaad ka furaysaa aqoon iyo waayo-aragnimo badan ganacsatadeena, lacag yar oo bil kasta la bixiyo waxay ka dhigan tahay inaad ku biirtay ELITE
Xirfadahayagu markasta maahan fulinta suuqa, markaa waxaad heli doontaa waqti badan oo aad ku raacdid iyaga, waxaan ku wareejineynaa ganacsiga, maqaarka madaxa waxaanan isticmaalnaa noocyo kala duwan oo ganacsi sida Iibso JOOJI, Iibso JOOJI & Iibso XADDID iwm.
Ku Soo Biir Kooxdayada Telegram-ka Bilaashka ah
Waxaan u dirnaa 3 calaamadood oo VIP ah usbuucii kooxdeena Telegram ee bilaashka ah, calaamad kasta waxay la timaadaa falanqeyn farsamo oo buuxda oo ku saabsan sababta aan u qaadaneyno ganacsiga iyo sida loo dhex dhigo dillaalkaaga.
Sidee Aayadeena Crypto u shaqeeyaan
Haddii aad ku cusub tahay adduunka calaamadaha crypto, noo oggolow inaan ku jabinno aasaaska kuu ah Shuruudaha Layman.
Astaamaha ugu muhiimsan ee calaamadaha crypto waa inaad heli doonto talo soo jeedin ganacsi. Tani waxay ku imaan doontaa waqtiga dhabta ah iyada oo loo marayo
telegraam - sidaa darteed waligaa ma waayi doontid fursad ganacsi oo suurtagal ah. Calaamad kasta oo ay kooxda ku sugan tahay CryptoSignals.org dirista waxay ka koobnaan doontaa macluumaad muhiim ah. Waa macluumaadkan kuu sheegaya sida looga faa'iideysto astaamaheena adoo dhigaya
amarrada kala duwan ee dulaalka aad dooratay. Si aan fikrad kaaga siiyo waxa a CryptoSignals.org Calaamadda 'crypto signal' waxay umuuqataa - kafiiri tusaalaha tusaale ahaan LTC / USD hoos ku qoran:
Sida aad kor ka arki karto, calaamadaha ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' waa inay had iyo jeer ku jiraan shan qodob oo xog muhiim ah. Tani waa lammaanaha loo yaqaan 'crypto couple' lafteeda - taas oo tusaalahan, ah LTC / USD. Waad arki doontaa in calaamaddu sidoo kale ay qeexayso in la sii dheeraado - taasoo la micno ah falanqeeyahayaga gudaha ku fikiraya in labada lammaane ay kor u kici doonaan qiimaha. Tan ugu muhiimsan, calaamadaha ugu fiican ee 'crypto' waa inay sidoo kale la yimaadaan xadka loo baahan yahay, joojinta-luminta, iyo qiimaha dalabka macaashka. Haddii aad ku cusub tahay ereyadan ganacsi ee muhiimka ah, waxaa ugu wanaagsan inaad fahan adag ka leedahay waxa ay micnahoodu yihiin ka hor intaadan is qorin adeegga calaamadaha crypto.
Si looga caawiyo nadiifinta ceeryaanta, waxaan u sharaxeynaa qodobbada xogta calaamadaha muhiimka ah si faahfaahsan hoosta.
Maxay tahay inay u ekaan karaan calaamadaha CRYPTO-ga ugu fiican?
Halkan waxaa ah burburka waxa calaamadaha ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' ay u ekaadaan - iyo waxa erey kasta macnihiisu yahay.
Midkani waa mid si qurux badan u sharraxaya. Si kastaba ha noqotee, waxay ku socotaa iyada oo aan la dhihin waxaad u baahan doontaa inaad ogaato labada calaamadood ee la xiriira. Waa inaan ogaano in falanqeeyayaasha gudaha ee CryptoSignals.org ay ku takhasuseen suuqyo badan oo suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency'. Kaliya kuma koobna tan waxaa ka mid ah crypto-to-fiat, laakiin lamaanaha loo yaqaan 'crypto-to-crypto', sidoo kale. Kuwa aan ka warqabin, lammaanaha loo yaqaan 'crypto-to-fiat couple' ayaa ka koobnaan doona hal lacag oo dijitaal ah sida Bitcoin iyo hal lacag oo fiat ah sida Doolarka Mareykanka. Tusaalahan, labada lamaane waxaa loo matalayaa inay yihiin BTC / USD. Dhacdo ahaan, tani waa lammaanaha ugu ganacsiga badan ee warshadaha - iyadoo balaayiin doolar ay gacmaha beddelayaan maalin kasta iyo maalin kasta. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, qaar badan oo ka mid ah calaamadaha crypto ee aad naga hesho, CryptoSignals.org ayaa ku xirnaan doonta suuqan. Si kastaba ha noqotee, ganacsadeyaasheena sidoo kale waxay si fiican u yaqaanaan ka ganacsiga noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'crypto-to-crypto couple'. Tan waxaa ka mid ah sida BTC / ETH - oo macnaheedu yahay waxaan ka ganacsaneynaa sicirka sarrifka ee u dhexeeya Bitcoin iyo Ethereum. Lammaane kale oo crypto ah oo ou ...
Dheer ama Gaaban
Halbeeg fure oo dheeri ah oo qasab ku ah meelaha calaamadaha crypto ayaa ah jihada suuqa. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad ku dheeraataa ama ka gaabsataa ganacsiga? Macluumaadkan la'aanteed, calaamadda 'crypto signal' ayaa noqon doonta mid aan qiimo lahayn. Kuwa aan ka warqabin: Haddii calaamadeena 'crypto' ay kuu sheegeyso inaad dheeraato, tani waxay ka dhigan tahay inaan u maleyneyno in labada lammaane ay kordhin doonaan qiimaha Haddii calaamadeena 'crypto' ay kuu sheegeyso inaad gaabiyo, tani macnaheedu waa inaan u maleyneyno in labada lammaane ay hoos u dhigi doonaan qiimaha Si loo sii caddeeyo: Haddii calaamadda 'crypto' ay ku farayso inaad sii dheeraato, markaa waxaad u baahan tahay inaad dalab iibsi ah ka dhigto dillaalka aad dooratay ee 'crypto' Haddii, si kastaba ha noqotee, calaamadda 'crypto' ay kuu sheegeyso inaad gaabiyo, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato dalab iib ah Kooxdayada Falanqeeyayaasha PipSignals ayaa si raaxo leh ugu socda kuna dheeraanaya lammaanaha 'crypto'. Muhiimad ahaan, ma jiro ku xirnaansho shucuur oo ku saabsan lacagta dijital ah ee aan ka ganacsaneyno. Taabadalkeed, ujeedkeena ugu weyn waa inaan ka macaashno booska. ...
Xaddid Qiimaha Amarka
Ha ku khaldamin taas - calaamadaha ugu fiican ee crypto ayaa had iyo jeer la imaan doona qiimaha dalabka xaddidan ee loo baahan yahay. Haddii aad ku cusub tahay ganacsiga, guud ahaan waxaad haysataa laba ikhtiyaar markay timaado suuqa. Sida caadiga ah, dallaaliinta internetka badankood waxay ku weydiiyaan haddii aad rabto inaad dhigto 'amar suuqa'. Tan macnaheedu waxa weeye in dillaalku si dhakhso leh u fulin doono ganacsigaaga - qiimaha soo socda ee la heli karo. In kasta oo tani ay kufiican tahay maal-gashiga muddada-dheer, runti kuma haboona ganacsiga muddada-gaaban ee crypto. Tani waa sababta oo ah way ka khatar badan tahay khatarta-gelitaanka ganacsiga qiimo qaas ah - sida ku cad cilmi-baarista aasaasiga ah ee la sameeyay. Tusaale ahaan, aan u malayno in annaga oo ah CryptoSignals.org aan ka ganacsaneyno BTC / USD - taas oo hadda lagu qiimeeyo $ 49,500. Kooxdayada falanqeeyayaasha gudaha waxay fiirin karaan farsamooyinka waxayna go'aansadaan in ay tahay in BTC / USD ay jabiso $ 50,000 - markaa waa in meel dheer la qaataa. Si loo hubiyo inaan kaliya ku galno qiime ka sarreeya $ 50,000 - oo aan ahayn curren ...
Qiimaha Dalbashada Joojinta
Ilaa hadda, waxaan xaqiijinay in calaamadaha ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' ay kuu sheegi doonaan waxa lamaanaha ah ee la ganacsanayo, haddii aad tahay mid dheer ama mid gaaban, iyo qiimaha gelitaanka ee ay tahay inaad ku dejiso amarkaaga xaddidan. Si kastaba ha noqotee, tani waa kalabar dagaalka. Si kastaba ha noqotee, si aad ugu ganacsatid qaab khatar-diid ah, waa inaad lahaataa istiraatiijiyad galitaan. Mar labaad, annaga oo ah CryptoSignals.org waxaan hubineynaa inaad heysato dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ka macaashto calaamadeena 'crypto' - taas oo ah sababta aan marwalba u bixinno amarro joogsi-lumis iyo faa'iido-qaadasho. Marka laga hadlayo joojinta-khasaarooyinka, tani waa aalad maareynta halista ah oo hubineysa inaynaan lacag badan ku lumin ganacsiga - waa inaysan u sii socon qorshe. Tani waa muhiim, inkasta oo aan hayno rikoodh raadraac dheer ah oo ku saabsan wax ka qabashada suuqa 'crypto' - ma sheeganayno inaan ku guuleysanno ganacsi kasta. Taas bedelkeeda, marwalba way waayi doonaan xirfado ganacsi. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan kuu soo jeedinaynaa sicirka dalabka joojinta-luminta habboon ee ay tahay inaad gayso marka aad wax ka qabanayso calaamadaha crypto. In cr ...
Waxaa jira hal macluumaad oo aad u muhiim ah oo calaamadaha ugu fiican ee crypto ay ku siin doonaan - taasina waa qiimaha dalabka macaash-doonka ee la soo jeediyay. Tani waxay u shaqeysaa si la mid ah amarka joojinta-luminta, laakiin halkii laga khafiifin lahaa halisteena, waxay raadineysaa inay ku xirto macaashkeena ganacsiga. Tusaalaha aan horey u soo sheegnay, waxaan ku xusnay in qiimaha dalabka macaashka-macaashka la soo jeediyay uu yahay $ 238.74. Tani waxay ku fadhidaa 3% ka sarreysa qiimaha dalabka xaddidan ee la soo jeediyey ee $ 231.79 - taas oo macnaheedu yahay inaan dooneyno inaan ku guuleysano 3% calaamaddan gaarka ah ee 'crypto'. Mar labaad, waa haddii qiimaha macaashka-macaashku iswaafajiyo suuqa - dillaalka loo yaqaan 'crypto broker' ee su'aasha laga qabo ayaa si toos ah u xidhi doona ganacsiga. Sidan oo kale, waxaan ku xiri karnaa faa'iidooyinkeena annaga oo aan u baahnayn inaan ku fariisano aaladdayada si aan gacanta uga baxno booska.
Khatarta iyo Abaalmarinta
Iyaga oo ka socda qaybta kore ee amarada joojinta iyo faa'iidooyinka, kooxdeena falanqeeyayaasha ee CryptoSignals.org waxay had iyo jeer maskaxda ku hayaan saamiga halista / abaalmarinta markay diraan calaamadaha crypto. Tusaalaha kor ku xusan, halistu waxay ahayd 1% - maadaama taasi ay tahay tii aan soo jeedinnay qiimaha joojinta-luminta oo lagu qiyaasay. Qaybta abaalmarinta ee isla'egtu waxay ahayd 3% - maadaama ay tahay meeshii aan dhignay amarkayaga faa'iidada-qaadashada. Muhiimad ahaan, inta badan calaamadaha crypto ee aan dirno waxay raaci doonaan 1/3 halista / abaalmarinta saamiga. Si fudud marka loo eego, tani waxay ka dhigan tahay inaan qatar u galineyno 1% caasimadeena si aan u kasbano guul 3% ah. Marka sidaas la sameynayo, waxaan kaliya u baahanahay inaan helno hal ganacsi oo guuleysta seddexdiidiiba si aan u kasbano.
Midkani waa mid si qurux badan u sharraxaya. Si kastaba ha noqotee, waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin inaad u baahan doonto inaad ogaato labada calaamadood ee la xiriira.
Waa in aan ogaano in falanqeeyayaasha gudaha ee CryptoSignals.org ay ku takhasuseen suuqyo badan oo suuq geyn ah. Kaliya kuma koobna tan waxaa ka mid ah crypto-to-fiat, laakiin lammaanayaasha loo yaqaan 'crypto-to-crypto', sidoo kale.
Kuwa aan ka warqabin, lamaanaha loo yaqaan 'crypto-to-fiat couple' ayaa ka koobnaan doona hal lacag oo dhijitaal ah sida Bitcoin iyo hal lacag oo fiat ah sida Doolarka Mareykanka. Tusaalahan, lammaanaha waxaa loo matali doonaa BTC / USD.
Dhacdo ahaan, tani waa lammaanaha ugu ganacsiga badan ee warshadaha - iyadoo balaayiin doolar ay gacmaha beddelayaan maalin kasta iyo maalin kasta. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, qaar badan oo ka mid ah calaamadaha crypto ee aad naga hesho, CryptoSignals.org ayaa ku xirnaan doonta suuqan.
Si kastaba ha noqotee, ganacsadeyaasheena sidoo kale waxay si fiican u yaqaanaan ka ganacsiga noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'crypto-to-crypto couple'. Tan waxaa ka mid ah sida BTC / ETH - oo macnaheedu yahay waxaan ka ganacsaneynaa sicirka sarrifka ee u dhexeeya Bitcoin iyo Ethereum.
Lammaane kale oo loo yaqaan 'crypto couple' oo falanqeeyayaashayada gudaha ku jira ay jecel yihiin inay ganacsadaan waa XRP / XLM. Tani waxay ka kooban tahay Ripple iyo Stellar waxayna soo bandhigaysaa fursado badan oo signiin ah oo loo yaqaan 'crypto signal' sababo la xiriira astaamaheeda aadka u kacsan.
Halbeeg fure oo dheeri ah oo qasab ku ah meelaha calaamadaha crypto ayaa ah jihada suuqa. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad ku dheeraataa ama ka gaabsataa ganacsiga? Macluumaadkan la'aanteed, calaamadda 'crypto signal' ayaa noqon doonta mid aan qiimo lahayn.
Kuwa aan ka warqabin:
Haddii calaamadeena 'crypto' ay kuu sheegeyso inaad sii dheeraato, tani macnaheedu waa inaan u maleyneyno in labada lammaane ay kordhin doonaan qiimaha
Haddii calaamadeena 'crypto' ay kuu sheegeyso inaad gaabiso, tani macnaheedu waa inaan u maleyneyno in labada lammaane ay hoos u dhacayaan qiimaha
Si loo sii caddeeyo:
Haddii calaamadda 'crypto' ay ku farayso inaad sii dheeraato, markaa waxaad u baahan tahay inaad dalab iibsi ka dhigto dillaalka aad dooratay ee 'crypto'
Haddii, si kastaba ha noqotee, calaamadda 'crypto' ay kuu sheegeyso inaad gaabiyo, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato amar iibin ah
Kooxdayada falanqeeyayaasha ee PipSignals ayaa si raaxo leh ugu tagaya muddo dheer iyo gaaban labadaba. Muhiimad ahaan, ma jiro ku xirnaansho shucuur oo ku saabsan lacagta dijital ah ee aan ka ganacsaneyno. Taabadalkeed, ujeedkeena ugu weyn waa inaan ka macaashno booska.
Ha ku khaldamin taas - calaamadaha ugu fiican ee crypto ayaa had iyo jeer la imaan doona qiimaha dalabka xaddidan ee loo baahan yahay. Haddii aad ku cusub tahay ganacsiga, guud ahaan waxaad haysataa laba ikhtiyaar markay timaado suuqa.
Sida caadiga ah, dallaaliinta internetka badankood waxay ku weydiiyaan haddii aad rabto inaad dhigto 'amar suuqa'. Tan macnaheedu waxa weeye in dillaalku si dhakhso leh u fulin doono ganacsigaaga - qiimaha soo socda ee la heli karo.
In kasta oo ay taasi ku habboon tahay maal-gashiga muddada-dheer, haddana runtii kuma habboona ganacsiga muddada-gaaban ee loo yaqaan 'crypto'. Tani waa sababta oo ah way ka khatar badan tahay khatarta-gelitaanka ganacsiga qiimo gaar ah - sida ku cad cilmi baarista aasaasiga ah ee la sameeyay.
Tusaale ahaan, aan u malayno in annaga oo ah CryptoSignals.org aan ka ganacsaneyno BTC / USD - taas oo hadda lagu qiimeeyo $ 49,500.
Kooxdayada falanqeeyayaasha gudaha waxay fiirin karaan farsamooyinka waxayna go'aansadaan in ay tahay in BTC / USD ay jabiso $ 50,000 - markaa waa in meel dheer la qaadaa.
Si loo hubiyo inaan kaliya ku galno qiime ka sarreeya $ 50,000 - oo aan ahayn qiimaha hadda jira ee $ 49,500 - waa halka ay amarka xaddidan ka imaaneyso.
Si kale haddii loo dhigo, si ganacsigeenna loogu fuliyo $ 50,000 - waa inaan ku abuurnnaa amar xaddidan qiimahaan. Markaan sameyno, dillaalkeennu wuxuu kaliya fulin doonaa ganacsigeenna haddii iyo goorta BTC / USD ay garaacdo $ 50,000. Ilaa iyo waqtigaas, amarka xaddidan ayaa weli la sugayaa.
Dhamaan kiisaska dhifka ah, dhammaan calaamadaha calaamadaha 'CryptoSignals.org' waxay la imaan doonaan qiimo dalab xaddidan oo la soo jeediyey. Waxa kaliya ee ka reeban halkan waa haddii aan aragno fursad ganacsi oo u baahan in si dhakhso leh wax looga qabto si looga fogaado inaan seegno.
Ilaa hadda, waxaan xaqiijinay in calaamadaha ugu fiican ee loo yaqaan 'crypto' ay kuu sheegi doonaan waxa lamaanaha ah ee la ganacsanayo, haddii ay tahay inaad tagto mid dheer ama mid gaaban, iyo qiimaha gelitaanka ee ay tahay inaad ku dejiso amarkaaga xaddidan.
Si kastaba ha noqotee, tani waa kalabar dagaalka. Si kastaba ha noqotee, si aad uga ganacsato qaab khatar-diid ah, waa inaad lahaataa istiraatiijiyad galitaan.
Mar labaad, annaga oo ah CryptoSignals.org waxaan hubineynaa inaad haysato dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ka macaashto calaamadeena 'crypto' - taas oo ah sababta aan marwalba u bixinno amarrada joojinta-luminta iyo faa'iidooyinka-macaashka. Marka laga hadlayo joojinta-khasaarooyinka, tani waa aalad maareynta halista ah oo hubineysa inaynaan lacag badan ku lumin ganacsiga - waa inaysan u sii socon qorshe.
Tani waa muhiim, inkasta oo aan hayno rikoodh raadraac dheer ah oo ku saabsan wax ka qabashada suuqa 'crypto' - ma sheeganayno inaan ku guuleysanno ganacsi kasta.
Taas bedelkeeda, marwalba way waayi doonaan xirfado ganacsi. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan kugula talineynaa qiime amar joogsi-lumis habboon oo ay tahay inaad gayso markaad ku dhaqmayso calaamadeena crypto.
Tusaalaha calaamadda 'crypto' ee aan horay u bixinnay, waxaan ku xusnay in meel dheer la dhigo BTC / USD qiimaha soo gelitaanka oo ah $ 231.79. Waxaan sidoo kale sheegnay in amarka joojinta-luminta la dhigo $ 229.48.
Tani waa sabab macquul ah - maadaama tani ay u taagan tahay luminta ugu badan ee 1%. Taasi waa in la yiraahdo, haddii BTC / USD ay naga hor istaagaan 1% oo markaa kadib ay ku dhufato qiimo dhan $ 229.48 - amarka joojinta-luminta ayaa bilaabmi doona. Markay sidaas tahay, dillaaliinta 'crypto' ayaa si otomaatig ah u xiri doona booska annaga oo waan socon doonnaa iyadoo lumis yar oo 1% ah.
Waxaa jira hal macluumaad oo aad u muhiim ah oo calaamadaha ugu fiican ee crypto ay ku siin doonaan - taasina waa qiimaha dalabka macaash-doonka ee la soo jeediyay. Tani waxay u shaqeysaa si la mid ah amarka joojinta-luminta, laakiin halkii laga khafiifin lahaa halisteena, waxay raadineysaa inay ku xirto macaashkeena ganacsiga.
Tusaalaha aan horey u soo sheegnay, waxaan ku xusnay in qiimaha dalabka macaashka-macaashka la soo jeediyay uu yahay $ 238.74. Tani waxay ku fadhidaa 3% ka sarreysa qiimaha dalabka xaddidan ee la soo jeediyey ee $ 231.79 - taas oo macnaheedu yahay inaan dooneyno inaan ku guuleysano 3% calaamaddan gaarka ah ee 'crypto'.
Mar labaad, waa haddii qiimaha macaashka-macaashku iswaafajiyo suuqa - dillaalka loo yaqaan 'crypto broker' ee su'aasha laga qabo ayaa si toos ah u xidhi doona ganacsiga. Sidan oo kale, waan ku xiri karnaa faa'iidooyinkeena iyada oo aan u baahnayn inaan ku fariisano aaladdayada si aan gacanta uga baxno booska.
Iyaga oo ka socda qaybta kore ee ku saabsan joojinta-iyo amarada macaashka, kooxdeena falanqeeyayaasha ee CryptoSignals.org had iyo jeer waxay maskaxda ku hayaan saamiga halista / abaalmarinta markay diraan calaamadaha crypto.
Tusaalaha kor ku xusan, halistu waxay ahayd 1% - maadaama taasi ay tahay tii aan soo jeedinnay qiimaha joojinta-luminta oo lagu qiyaasay. Qaybta abaalmarinta ee isla'egtu waxay ahayd 3% - maadaama ay tahay meeshii aan dhignay amarkayaga faa'iidada-qaadashada.
Muhiimad ahaan, inta badan calaamadaha crypto ee aan dirno waxay raaci doonaan 1/3 halista / abaalmarinta saamiga. Si fudud marka loo eego, tani waxay ka dhigan tahay inaan qatar u galineyno 1% caasimadeena si aan u kasbano guul 3% ah. Marka sidaas la sameynayo, waxaan kaliya u baahanahay inaan helno hal ganacsi oo guuleysta seddexdiidiiba si aan u kasbano.
Calaamadaha Crypto ee Bilowga at CryptoSignals.org
01. Fahmaan Suuqa
Ma waxaad dooneysaa inaad ka ganacsato cryptocurrencies sida Bitcoin,
Ethereum, iyo Ripple - laakiin wax yar bay ka fahmayaan sida suuqani u shaqeeyo?
Hadday sidaas tahay, waa inaad ogaataa in ganacsatada xilliyaysan ay sannado badan baranayeen xirfadda falanqaynta farsamada. Tan macnaheedu waa
sameynta cilmi baaris heer sare ah oo ku saabsan isbeddelada qiimaha loo yaqaan 'cryptocurrency' iyadoo loo marayo tilmaamayaal kala duwan. Ka fikir khadadka RSI, MACD, Celceliska Dhaqdhaqaaqa, iyo inbadan.
02. Ku kasbato xirfad-dejintayada
Runtu waxay tahay - haddii aadan lahayn xirfad-dejinta inaad ku fuliso farsamo
cilmi baaris heer sare ah, waad ku dhibtoon doontaa inaad sameyso
guulaha isdaba jooga ah ee warshadaha ganacsiga crypto. Taa baddalkeeda, waxaa jira fursad kasta oo aad ku afuufi karto dheelitirka xisaabtaada. Taa baddalkeeda, tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku ganacsatid suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency cryptocurrency' adigoon u baahnayn inaad geliso mid ka mid ah casharrada.
Dhinaca kale, waa inaan sidoo kale ogaano in calaamadeena 'crypto' aysan ku habooneyn oo kaliya cusub. Taas bedelkeeda, waxaa laga yaabaa inaadan haysan waqti aad ku baarto suuqyada. Sidan oo kale, CryptoSignals.org waxay ka caawin kartaa ganacsatada dhammaan xirfadaha-xirfadaha!
03. Ganacsi ku macaash
Tani waa meesha ay ku caawin karto CryptoSignals.org. Marka aan si faahfaahsan u sharraxno hoosta, calaamadahayaga crypto ayaa kuu sheegi doona
wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad uga ganacsato qaab khatar-diid ah. Taasi waa in la yiraahdo, markii aad naga hesho calaamad - waxaad ogaan doontaa labada crypto ee ganacsiga, haddii aad tahay mid dheer ama mid gaaban, iyo qiimaha gelitaanka iyo bixitaanka ee la beegsanayo.
Taasi waa Waxa ay Macaamiishayadu u sheegaan
Ma aanan ogeyn waxa aan sameynayay laakiin tan iyo markii aan ku biiray kooxda telegram-ka bilaashka ah waxaan hadda ka furay koonto a xirfadeed dillaal iyo hada waan ahay ka dib ganacsiyada kooxda VIP. Hadda waxaan akhriyaa falanqaynta farsamada maalinlaha ah waxaanan raacayaa youtube-ka channel oo daawo dhamaan muuqaalada.
Wax badan ayaan ka bartay crypto tan iyo markii aan ku biiray VIP Telegram koox. Halkaas waa maqaalo maalinle ah aan awoodo akhri ka dibna ka ganacsado si aad taas u kaydiso macluumaad. Waa 10 10kiiba XNUMX aniga ahaan.
Waxaan ku biiray Telegram bilaash ah ka dibna si dhakhso leh loogu casriyeeyay kooxda VIP. Waxaan u arkaa falanqaynta farsamada runta inay xog badan tahay taasna runtii waxay iga caawineysaa inaan wax badan ka barto cryptocurrency iyo sida loo ganacsado.
Calaamadaha la bixiyaa waa kuwo aad u fudud in la raaco.
WAANU KU SOO DIRAYNAA FALANQEYNTA FARSAMO OO LAGU SAMEEYO GOOB KASTA, HOOS KA DAAWO TUSAALAYAASHA GANACSATADA!
Ganacsadayaasheena waxaa laga soocay Sagaaro Ganacsi oo ku saleysan Adduunka oo idil!
Waad ku biiri kartaa bilaashka Kooxda VIP hoosta adigoo gujinaya badhanka si aad u aragto tusaalooyinka meheradeena.
SIGNALADA ugu wanaagsan ee CRYPTO
Kaliya maahan inaad ubaahantahay inaad hesho calaamadaha ugu fiican ee crypto ee laga heli karo suuqa - laakiin sidoo kale dillaal sare oo lagu qiimeeyo si aad u dhigto amarrada loo baahan yahay. Si kastaba ha noqotee, adigoon lahayn dallaal wanaagsan oo dhinacaaga ah, ma awoodi doontid inaad gasho goobta ganacsiga crypto.
Kahor xitaa intaadan fiirin khidmadaha iyo guddiyada, waxaa muhiim ah inaad adeegsato calaamadeena 'crypto' oo leh dulaal la habeeyay, laguna kalsoon yahay. Nasiib darrose, in badan oo ka mid ah goobaha ganacsiga ee loo yaqaan 'crypto' ganacsiga waxay ku shaqeeyaan iyada oo aan laysan sharciyeyn sharci ah - taas oo ah mid aad u dhib badan. Si fudud u dhig, tani macnaheedu waa in dallaalku uusan u baahnayn inuu u jawaabo hay'adda maaliyadeed nooc kasta ha noqotee - marka waxyaalaha sida daryeelka macaamiisha iyo ilaalinta maal-gashiga badiyaa ma jiraan. Si lagaaga caawiyo inaad kuu tilmaamto jihada saxda ah - qaar ka mid ah xakameeyayaasha muhiimka ah ee meeshan waxaa ka mid ah FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), iyo CySEC (Cyprus). ...
Guddiyada iyo Fidinta
Maaddaama qaar ka mid ah calaamadeena 'crypto' ay bartilmaameedsanayaan guulo dhaqso leh oo dhexdhexaad ah, runtii waa muhiim inaad doorato dallaal bixiya guddiyo hoose iyo fiditaan adag. Marka laga hadlayo tan hore, waxaa jira dillaaliin badan oo loo yaqaan 'crypto brokers' oo ka shaqeeya meesha bannaan oo kuu oggolaanaysa inaad ka ganacsato guddi-la'aan. Taas macnaheedu waxa weeye in khidmadda kaliya ee aad bixin doontaa ay ka timaaddo faafitaanka.
Dhammaan xubnaheenna ku jira kooxda 'CryptoSignals VIP Telegram group' ma hayaan qaddar weyn oo raasamaal ah oo ay ku ganacsadaan. Haddii tani kula mid tahay, taas macnaheedu maahan inaadan guuleysan karin calaamadahayada. Taas bedelkeeda, adoo adeegsanaya dallaal loo yaqaan 'crypto broker' oo bixiya ka faa'iideysi, waxaad awoodi doontaa inaad ku ganacsato wax ka badan inta aad ku leedahay koontadaada. Qadarka leverage ee aad heli karto waxay ku xirnaan doontaa dhowr arrimood - sida dillaalka laga hadlayo iyo waddanka aad ku nooshahay.
Sababtoo ah dillaalkaaga aad dooratay wuxuu bixiyaa suuqyo dijitaal ah, tani macnaheedu maahan inay ku habboon tahay calaamadaha crypto. Si kastaba ha noqotee, kooxdeena falanqeeyayaasha gudaha waxay jecel yihiin inay qaadaan qaabab kala duwan oo ku saabsan ganacsiga - taas oo macnaheedu yahay inay bartilmaameedsanayaan lammaanaha loo yaqaan 'crypto' ee dhammaan qaababka iyo cabirka. Tusaale ahaan, hal calaamad ayaa laga yaabaa inay la xiriirto BTC / USD halka tan xigta ay u muuqato inay ka faa'iideysaneyso ETH / XRP! Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dallaal loo yaqaan 'crypto broker' oo bixiya suuqyo badan - oo daboolaya labadaba crypto-to-fiat iyo crypto-to-crypto.
Sidoo kale waa inaad hubisaa in dookhaaga aad dooratay ee crypto uu ku siinayo habka lacag bixinta ee aad doorbidayso. Nidaamyada ugu fiican ee aan jecel nahay inaan isticmaalno waxay bixiyaan kaarka deynta / kaarka deynta iyo keydadka elektaroonigga ah. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad isla markiiba maalgeliso koontadaada iyo xaalado badan - bilaash. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fogaato barnaamijyada aqbalaya oo keliya lacagaha siligga bangiga. Tani waa sababta oo ah waxay qaadan kartaa dhowr maalmood inta ay lacagtu imaaneyso.
Waxay oranaysaa in Bitcoin ay tahay tan ugu badan ee loo ganacsado suuqan. Sidan oo kale, ganacsatadayadu waxay si joogto ah u eegi doonaan inay ka macaashaan fasalkan hantida badan ee dareeraha ah. In kasta oo xaalado badan aan u diri doonno calaamadeena ganacsiga Seeraar ee BTC / USD - waxaan sidoo kale daboolaynaa lammaanaha loo yaqaan 'crypto-to-crypto-couple'. Tusaale ahaan, haddii baarayaashayada gudaha ay u maleynayaan in BTC ay ka qiimo badan tahay ETH - waxaan u diri doonnaa calaamadda ganacsiga Bitcoin oo leh natiijooyinkayaga. Si aan fikrad kaaga siiyo sida ugu wanaagsan ee calaamadaha ganacsiga Bitcoin ay halkan uga shaqeeyaan CryptoSignals.org - kafiiri tusaalaha hoose. Lammaanaha: BTC / Amarka USD: Sho ...
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in calaamadaha ugu fiican ee laga heli karo suuqa laga heli karo koox Telegram ah. Tani waa sababta oo ah waxaad heli doontaa calaamadaha tayada leh ee waqtiga dhabta ah - taas oo macnaheedu yahay inaadan marna seegi doonin fursad faa'iido-qaadasho mar kale! Noocyada ugu fiican ee calaamadaha crypto Telegram kooxaha sida caadiga ah waxay leeyihiin kumanaan xubnood oo firfircoon. Tani waxay kuu oggolaaneysaa adiga iyo xubnahaaga kaleba inaad ka wada hadashaan fikradaha ganacsiga ganacsiga ee loo maro barnaamijka. Calaamadaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'crypto signal' kooxaha Telegram sidoo kale waxay la yimaadaan waqtiga dhabta ah taageerada macaamiisha. Xitaa ka sii muhiimsan, adoo ku helaya calaamado tayo leh Telegram - habka ugu fiican ...
Kahor xitaa intaadan fiirin khidmadaha iyo guddiyada, waxaa muhiim ah inaad adeegsato calaamadeena 'crypto' oo leh dulaal la habeeyay, laguna kalsoon yahay.
Nasiib darrose, in badan oo ka mid ah goobaha ganacsiga ee loo yaqaan 'crypto' ganacsiga waxay ku shaqeeyaan iyada oo aan laysan sharciyeyn sharci ah - taas oo ah mid aad u dhib badan.
Si fudud u dhig, tani macnaheedu waa in dallaalku uusan u baahnayn inuu u jawaabo hay'adda maaliyadeed nooc kasta ha noqotee - marka waxyaalaha sida daryeelka macaamiisha iyo ilaalinta maal-gashiga badiyaa ma jiraan.
Si lagaaga caawiyo inaad kuu tilmaamto jihada saxda ah - qaar ka mid ah xakameeyayaasha muhiimka ah ee meeshan waxaa ka mid ah FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), iyo CySEC (Cyprus).
Maaddaama qaar ka mid ah calaamadeena 'crypto' ay bartilmaameedsanayaan guulo dhaqso leh oo dhexdhexaad ah, runtii waa muhiim inaad doorato dillaal bixiya guddiyo hoose iyo fiditaan adag.
Marka laga hadlayo tan hore, waxaa jira dillaaliin badan oo loo yaqaan 'crypto brokers' oo ka shaqeeya meesha bannaan ee kuu oggolaanaysa inaad ka ganacsato komishan la'aan. Tani waxay ka dhigan tahay in khidmadda kaliya ee aad bixin doontaa ay ku timaaddo faafitaanka.
Sababtoo ah dillaalkaaga aad dooratay wuxuu bixiyaa suuqyo dijitaal ah, tani macnaheedu maahan inay ku habboon tahay calaamadaha crypto.
Si kastaba ha noqotee, kooxdeena falanqeeyayaasha gudaha waxay jecel yihiin inay qaadaan qaabab kala duwan oo ku saabsan ganacsiga - taas oo macnaheedu yahay inay bartilmaameedsanayaan lammaanaha loo yaqaan 'crypto' ee dhammaan qaababka iyo cabirka. Tusaale ahaan, hal calaamad ayaa laga yaabaa inay la xiriirto BTC / USD halka tan xigta ay u muuqato inay ka faa'iideysaneyso ETH / XRP!
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dallaal loo yaqaan 'crypto broker' oo bixiya suuqyo badan - oo daboolaya labadaba crypto-to-fiat iyo crypto-to-crypto.
Sidoo kale waa inaad hubisaa in dookhaaga aad dooratay ee crypto uu ku siinayo habka lacag bixinta ee aad doorbidayso. Nidaamyada ugu fiican ee aan jecel nahay inaan isticmaalno waxay bixiyaan kaarka deynta / kaarka deynta iyo keydadka elektaroonigga ah. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad isla markiiba maalgeliso koontadaada iyo xaalado badan - bilaash.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fogaato barnaamijyada aqbalaya oo keliya lacagaha siligga bangiga. Tani waa sababta oo ah waxay qaadan kartaa dhowr maalmood inta ay lacagtu imaaneyso.
Waxay oranaysaa in Bitcoin ay tahay tan ugu badan ee loo ganacsado suuqan. Sidan oo kale, ganacsatadayadu waxay si joogto ah u eegi doonaan inay ka macaashaan fasalkan hantida badan ee dareeraha ah.
In kasta oo xaalado badan aan u diri doonno calaamadeena ganacsiga Seeraar ee BTC / USD - waxaan sidoo kale daboolaynaa lammaanaha loo yaqaan 'crypto-to-crypto-couple'. Tusaale ahaan, haddii baarayaashayada gudaha ay u maleynayaan in BTC ay ka qiimo badan tahay ETH - waxaan u diri doonnaa calaamadda ganacsiga Bitcoin oo leh natiijooyinkayaga.
Si aan fikrad kaaga siiyo sida ugu wanaagsan ee calaamadaha ganacsiga Bitcoin ay halkan uga shaqeeyaan CryptoSignals.org - kafiiri tusaalaha hoose.
Lammaanaha: BTC / USD
Xaddid: $ 61,500
Joojinta-Khasaaraha: $ 62,000
Qaado-macaash: $ 57,000
Soo jeedinta calaamadaha Bitcoin ee kor ku xusan waxay muujineysaa in ganacsatadeenna gudaha ku jirta ay aaminsan yihiin in BTC / USD ay hoos u dhici doonto saacadaha soo socda. Laakiin, ma dooneyno inaanu suuqa galno illaa ay labada lamaane ku dhacaan barta aan ka leenahay ee kicinta - taas oo tusaalahan uu yahay $ 61,500.
Si loo hubiyo in aan ku daboolan nahay haddii ay dhacdo sii socoshada kor u kaca, soo jeedinta calaamadaha Bitcoin ayaa sidoo kale kugula talineysa qiimaha joojinta-luminta ee $ 62,000.
Tani waa wax aan marwalba bixinno markaan qaybinayno calaamadeena tayada leh ee Bitcoin - maadaama aan si fiican ugu xeel-dheernahay ganacsiga halista-diidmada ah. Calaamadeena ganacsiga Seeraar sidoo kale waxay kujiraan amar soojeedin faa'iido qaadasho ah. Haddii ay kiciso, tani waxay si otomaatig ah u xireysaa faa'iidooyinkaaga dookhaaga 'crypto' ee aad dooratay.
Calaamadaha Ganacsi ee Bilaashka ah
Adigu miyaad suuqa ugu jirtaa calaamadaha Bitcoin ee bilaashka ah? Hadday sidaas tahay, annaga oo ka tirsan CryptoSignals.org waxaan bixinnaa adeegga calaamadda Seeraar oo bilaash ah oo ka kooban saddex talo soo jeedin ganacsi usbuucii. Si ka duwan qaar badan oo ka mid ah tartamayaashayada - kama codsaneyno inaad bixiso lacag dheeraad ah si aad u muujiso amarka xaddidan ama qiimaha joojinta-luminta.
Taas bedelkeeda, waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka aan kor ku soo wada hadalnay - markaa taasi waa lammaanaha Bitcoin, booska dheer ama gaaban, iyo xaddidaadda, joojinta-luminta, iyo qiimaha macaashka.
Sababta aan u bixinno calaamadaha ganacsiga Bitcoin ee lacag la'aanta ah ayaa ah in tani ay u oggolaanayso xubnaha cusub inay tijaabiyaan adeeggayaga ka hor intaanay ballan qaad samayn. Muhiimad ahaan, waxaad u baahan tahay oo dhan inaad sameyso si aad u hesho calaamadeena bilaashka ah ee Bitcoin waa inaad naga diiwaangelisaa koontada halkan CryptoSignals.org.
Uma baahnid inaad dhigatid wax lacag ah si aad ugu hesho marinnada calaamadeena ganacsiga ee 'crypto free'. Saas ma aha, marka aad isdiiwaangaliso - waxaad toos ugu wareegi kartaa kooxdeena signalada Telegram ee bilaashka ah!
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in calaamadaha ugu fiican ee laga heli karo suuqa laga heli karo koox Telegram ah. Tani waa sababta oo ah waxaad heli doontaa calaamadaha tayada leh ee waqtiga dhabta ah - taas oo macnaheedu yahay inaadan marna seegi doonin fursad faa'iido-qaadasho mar kale!
Noocyada ugu fiican ee calaamadaha crypto Telegram kooxaha sida caadiga ah waxay leeyihiin kumanaan xubnood oo firfircoon.
Tani waxay kuu oggolaaneysaa adiga iyo xubnahaaga kaleba inaad ka wada hadashaan fikradaha ku saabsan ganacsiga loo adeegsado barnaamijka.
Calaamadaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'crypto signal' kooxaha Telegram sidoo kale waxay la yimaadaan waqtiga dhabta ah taageerada macaamiisha.
Xitaa ka sii muhiimsan, adoo ku helaya calaamado tayo leh Telegram - bixiyeyaasha ugu fiican ee meeshan sidoo kale waxay ku lifaaqi doonaan jaantus ama jaantus talo soo jeedin kasta.
Si kale haddii loo dhigo, calaamadaha ugu fiican ee 'cryptogram kooxaha Telegram waxay kuu oggolaanayaan inaad kasbato oo aad wax barato isla waqtigaas.
Kahor intaadan bilaabin calaamadaha ugu fiican ee 'cryptogram Telegram group' oo aad dooratay - waxaan kugula talin lahayn inaad dejiso ogeysiis gaar ah. Adoo hubinaya ogeysiiskan dhawaaqa ah inuu u gaar yahay calaamadahaaga crypto Telegram group - waxaad ogaan doontaa inaad si dhakhso leh u furto barnaamijka si aad u dhigto amarrada la soo jeediyay.
Kooxda Telegram Calaamadaha Crypto Bilaashka ah
Qaar idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay tijaabiyaan astaamahayaga tayo sare leh ee loo yaqaan 'crypto signal' ka hor inta aan kor loo qaadin qorshaheenna ugu sarreeya. Hadday sidaas tahay, waad ku farxi doontaa inaad ogaato inaan sidoo kale bixinno calaamado bilaash ah oo loo yaqaan 'cryptogram' Telegram group. Markaad ku soo biirto kanaalkayaga Telegram-ka ee sii kordhaya - waxaad heli doontaa 3 x calaamadaha loo yaqaan 'crypto' bilaash ah usbuucii.
Tani waxay dabooli kartaa lammaanaha loo yaqaan 'crypto-to-crypto' sida BTC / EUR, BTC / USD, ama ETH / USD. Xaaladaha kale, qaar ka mid ah astaamahayaga 'crypto free' ayaa dabooli doona lammaanaha ka kooban laba hanti dijitaal ah. Tusaale ahaan, waxaan si joogto ah ugu dirnaa calaamadeena bilaashka ah ee 'BTC / ETH, BTC / XRP', iyo ETH / LTC.
Mar alla markii aad hesho signiin bilaash ah oo loo yaqaan 'crypto' oo loo maro kooxdeena Telegram - waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad u gudubtaa dulaalka aad dooratay oo aad dhigtaa amarrada la soo jeediyay. Xaqiiqdii, haddii aad tahay ganacsade caqli badan - waxaad u badan tahay inaad go'aansato inaad nagu tijaabiso adoo adeegsanaya koontada demo ee dilaalnimada bilaashka ah.
Markaad sidaas sameysid - uma baahnid inaad hal qatar ku gasho calaamadeena bilaashka ah ee 'crypto'. Taabadalkeed, waxaad kuqorineysaa amarradeena la soo jeediyay 'lacagta waraaqaha'. Ka dib marka meel kasta oo calaamado ah la xidho - markaa waad qori kartaa natiijada booska.
Tusaale ahaan, haddii aan ku sameynay 25 pips calaamadda bilaashka ah ee 'crypto', hubi inaad sameyso qoraal tan. Dhamaadka tijaabadaada - haddii aad aragto in calaamadahayaga bilaashka ah ee 'crypto' ay la kulmeen wixii aad ka filaysay - waxaad ka fiirsan kartaa inaad u cusbooneysiiso qorshahayaga mudnaanta leh. Markaad sidaas sameysid, waxaad heli doontaa 3-5 calaamado crypto maalinle ah!
MAXAA KA MID AH SIGNALKEENA VIP CRYPTO KOOXDA TELEGRAM
Ku soo biir xubnaheena 10,000 + ee jira ee ka kala yimid daafaha aduunka oo dhan kuwaas oo ka macaashayay kuweena VIP Calaamadaha Crypto oo ay noqdaan ganacsato xirfadlayaal ah.
3-5Calaamadaha Crypto maalin
10k +Xubnaha Telegram
Diyaar ma u tahay inaad noqotid
GUUL GUUL CRYPTO?
CryptoSignals.org waa koox ganacsato aad u tababaran ah oo ka ganacsanayay suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency cryptocurrency' tan iyo 2014, waxaan go'aansanay inaan sameysano beel telegraam si dadka kale ay wax uga bartaan calaamadeena saxda ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency'.
NAGU SOO booqo warbaahinta bulshada
Calaamadaha Crypto Free ee ugu Fiican May 2022 & Wararka Crypto
Fort Street, Guriga Artemis,
© 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG. DHAMAAN XAQA AYAA XADAY. Macluumaadka ku jira website-ka cryptosignals.org iyo gudaha kooxdayada Telegram waxaa loogu talagalay ujeeddooyin waxbarasho mana aha in loo fasirto talo maalgelineed. Ka-ganacsiga suuqyada maaliyadeed waxay xanbaarsan tahay khatar sare oo laga yaabo inaysan ku habboonayn dhammaan maalgashadayaasha. Cryptosignals.org ma qaadato mas'uuliyadda khasaaraha ka dhashay waxa ku jira gudaha kooxaha Telegram-keena.